दुःखद खबर- खुकुरी प्र:हार गरी एक महिलाको ह त्या
September 12, 2020 1274
उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा–११ लखन’थुम्कामा खुकुरी प्र’हार गरी एक महिलाको ह त्या गरिएको छ । इलाका प्र’हरी कार्यालय कटारीका डीएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीका अनुसार शनिबार बिहान स्थानीय २५ वर्षीय रोशन राना मगरले छिमेकी ४२ वर्षीया डोरकुमारी राउतको ह’त्या गरेका हुन् ।
‘मगरले राउतको घरमै पुगेर टाउको, ढाड र हातमा खु’कुरी प्र’हार गरेको देखिन्छ’, डीएसपी भण्डारी क्षेत्रीले भने । ह त्या गरेको आ’रोपमा मगरलाई कटारी ११ हात्तीसुडेको हुपटार जंगलबाट नि’यन्त्रणमा लिइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
अहिले घट&नाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । मृ तक महिलाको श व पोष्टमा’र्टमका लागि क’टारी अस्पताल ल्याउँदै गरेको पनि डीएसपी भण्डारीले जानकारी दिए । कटारी नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष सरोज बुढाथो’कीले लागूऔ’षधमा लठ्ठिएर ह त्या गरेको हुन सक्ने बताए ।
‘बिहान कटारी बजार गएर लागूऔ’षध से’वन गरेर फर्केको देखिन्छ’, अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘लागूऔ’षध से’वन गरी बेहो’स मै ह त्या गरेको हुनुपर्छ । बिहान करीब ९ बजे तीर घरमै आएर घरबाट निकालेर टाउको, ढाड र हातमा खुकुरी प्र’हार गर्दै सय मीटर तलसम्म लगेका छन् ।’ – न्युज२४ नेपाल
Prevउत्तर कोरिया’को आदेश: ‘सीमा क्षेत्रमा १ किलोमिटर भित्र छिर्ने जोसुकैलाई पनि गोली हान्नु’….
Nextचर्चित हाँस्य कला’कार देवी’राम पराजुली ‘भोकलाग्यो’लाई कोरोना संक्र’मण….
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81530)